प्रचण्डको सिंगापुर बसाईपछि नयाँ समीकरण !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रचण्डको सिंगापुर बसाईपछि नयाँ समीकरण !
काठमाडौं। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच दिल जोडिन सकेको छैन। दोस्रो तहका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र केही न केही पाकेको गन्ध बाहिर आइरहेको छ। प्रचण्डको दुई साता लामो सिंगापुर बसाइँपछि नेकपाभित्र नयाँ खालको समीकरण बनेको चर्चा हुन थालेको छ। महासचिवबाट हटाइएका ईश्वर पोखरेलले आफूलाई सिध्याउन व्यक्तिमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘राजनीति गर्न हिँडेको मान्छेमाथि नै राजनीति गर्नु उचित होइन’ भनेका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले नेकपाका नेताहरूलाई एकले अर्कालाई सिध्याउन के–केसम्म हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ।
टोपबहादुर रायमाझी पनि मौन बसेका छन्। उनलाई पनि प्रचण्डले अगाडि ल्याउन रुचाएका छैनन्। लो प्रोफाइलमा बसेका रायमाझीले आफ्नै खालको संगठन गर्दै आएका छन्। सुरुवाती दिनमा पार्टी एकीकरणमा उत्साहित देखिएका रायमाझीले जिम्मेवारी बाँडफाँटमा चित्त दुखाएका छन्।
रायमाझीका धेरै साथीहरूलाई प्रचण्डले साइजमा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर गुट सञ्चालन गरिरहेका छन्।
ओलीको गुटलाई विष्णु रिमालले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। रिमालले ओलीलाई कठपुतली बनाएको भनेर पूर्व एमालेका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। हुन पनि ओलीलाई भेट्न वा काम लिनका लागि रिमालको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ।
प्रचण्डले पनि मुलुकको राजनीतिलाई अब आफूमा केन्द्रित गराउँदै छन्। सिंगापुरमा रहँदा विभिन्न पक्षसँग भेट गरेका उनले ओलीलाई दवाव दिएर पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएका छन्। सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड हाबी हुँदै ‘म नहुँदा पार्टी नै सिथिल भयो’ भन्ने सन्देश दिएका छन्। प्रचण्डको यो रवैयाबाट ओली हच्किएको एक नेताले बताए। यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिक